musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Poland Breaking Nhau » Poland inogadzirira kukanda chikamu chayo chekushanya
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Poland Breaking Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Poland iri kushanduka ikaita inzvimbo yakanaka kune avo vadiki vafambi vasina kukwanisa kuwana kwega kwega kweanosvika makore maviri.
Poland inzvimbo yegore-rese iyo inopa yakasarudzika rondedzero yezviitiko uye kukosha kusingakundiki kana ichienzaniswa nevamwe vayo vekuEurope.
Iine anopfuura makumi matanhatu nematanhatu mapurojekiti emahotera akarongwa uye makumi matatu neshanu nekuda kwekuvhurwa zviri pamutemo muna62, Poland iri kuisa pamberi pakusimudzira kukura kwayo kwekushanya munguva yepashure pehosha.
Maguta ePoland anonyatso sanganisa nzvimbo dzemadhorobha nenzvimbo dzegirini dzakasvibirira, uye hapana guta rinoita izvi zvirinani kupfuura Warsaw.
Nechiziviso chekuti nyika dzepasi rese traffic traffic system iri kurerutswa muEngland nerondedzero imwechete yakatsvuka kubva muna Gumiguru wechina, mazororo kuPoland, imwe yenzvimbo dzakanakisa dzeEurope kune vafambi vadiki, vadzoka.
Kuuya kushanda kubva muna 4th Gumiguru, chiziviso ichi chinoreva vanhu vanodzoka kubva Porendi haichazofanirwi kugara muhotera iri yoga, kana nyika ikaramba iri kure nemutsvuku. PCR bvunzo hadzichazodikanwa kune vaccinic yakazara vafambi vanodzokera kuEngland, uye pasi peiyo nyowani yekuyedza hutongi, vanhu vane mabasa ese ari maviri havadi kutora pre-kuenda bvunzo vasati vasiya chero nyika isiri pane tsvuku rondedzero.
Kubva pamhenderekedzo yegungwa yeBaltic ine mahombekombe ejecha jena, inonakidza UNESCO- masango akadzivirirwa uye titanic Tatra makomo kune hupfumi hwemaguta akazara nenhoroondo, nzvimbo dzakasvibirira uye hupfumi hwetsika tsika, Porendi inzvimbo yegore-rese iyo inopa yakasarudzika rondedzero yezviitiko uye kukosha kusingakundiki zvichienzaniswa nevamwe vayo vekuEurope. Izvi zvinhu zvinoita kuti Poland ive nzvimbo yakanakira vafambi vechidiki avo vasina kukwanisa kuwana kwega kwega kweanosvika makore maviri.
Nemapurojekiti anopfuura makumi matanhatu nematanhatu emahotera akarongwa uye makumi matatu neshanu nekuda kwekuvhurwa zviri pamutemo muna62, kuunza makamuri matsva 35 2021 ku Porendi, nyika iri kukoshesa kusimudzira kukura kwayo kwekushanya munguva yepashure pehosha. Kubva kuguta rekushanya kumaruwa, muna Chikunguru, UNESCO yakazivisa kuti Masango ePoland eAkare uye ePrimval beech akapihwa World Heritage Status. Masango ekare eCarparthi anotenderera nyika dzinoverengeka, uye chikamu chePoland ndiyo imwe yepasirese Bieszczady National Park.
Yakanakisa Guta reEurope Kuputsa Kwakananga kune Vechidiki Vafambi
Nyudza muKrakow, guta guru rePoland
Krakow iri kubuda seimwe yemaguta ekutanga eEuropean break nzvimbo, uye nechikonzero chakanaka. Guta rine World Heritage pedigree, ine iconic Old Town, Wawel Castle uye Kazimierz dunhu vese vari veUNESCO World Heritage runyorwa. Krakow zvakare yaimbova guta guru reEuropean retsika nemitambo inopfuura zana uye zviitiko zvine mukurumbira zvepasirese zvinoitika pano pagore. Iwe zvakare uchawana chikamu chechina chePoland yakazara muunganidzwa wemuseum mamuseum muguta. Sokunge kuti aya marumbidzo akakwirira anga asina kukwana kuti akwezve, iro guta rave zvakare riri Guta reEuropean reGastronomic Tsika. Iwe uchawana anokwana makumi maviri nematanhatu maresitorendi akabata mutsauko weMichelin pano, uye vangangoita kakapetwa kaviri sekuremekedzwa naGault & Millau. Kubva pamhando yepamusoro yezvigadzirwa kusvika kune vanozivikanwa pasi vese mashefu, Krakow's foodie scene akapfuma uye akasiyana.